Anyị Uru - Shenzhen Yuxingyuan Onyinye Packaging Co., Ltd.
Ihe kpatara ịhọrọ anyị dị ezigbo mfe: Shenzhen Yuxingyuan Gift Packaging Co., Ltd. na-ejikọ obibi akwụkwọ, imewe na nrụpụta. Companylọ ọrụ ahụ etinyela ọtụtụ iri nde yuan na-ewu ígwè na akụrụngwa, ma nwee ọtụtụ usoro nke igwe Heidelberg kachasị agba anọ, Martini na-agba dragọn mbọ, Stahl mpịachi igwe, igwe na-ekpughere, igwe stampụ, na gluu zuru ezu set nke elu ígwè na ndị ọzọ post-nhazi akụrụngwa dị ka igwe, mama nkịtị igwe, na-ekpo ọkụ zọ igwe, biya igwe, embossing igwe, UV igwe, mmanụ polishing, nkwakọ mmepụta akara na ndị ọzọ post-nhazi akụrụngwa; zuru okè mmepụta ngwá na nlezianya management-eme ka ụlọ ọrụ quality Iru mba elu larịị, na-enye elu-edu onye-nkwụsị ọrụ maka gị ngwaahịa. Ọkachamara ọkachamara + ọrụ ọkachamara, uru dị mma maka ego! Nweta usoro mbipụta Shenzhen ka mma yana mbọ mbọ! Ngwá ọrụ dị elu na-enweta mbipụta dị elu.
Achọpụtaghị akwụkwọ dị elu site na akụrụngwa dị elu, ụlọ ọrụ ahụ ghọtara nke a. N'ihi ya, akụrụngwa dị elu dị ka igwe nrụpụta Komori G40 abụọ, igwe mpịachi MBO otu, yana otu Holler sadulu jikọrọ ụzọ abụọ wee "dozie" ụlọ ọrụ ahụ na 2009. Iji kwekọọ nnukwu nrụpụta ikike yana ogo dị elu nke ndị a. akụrụngwa dị elu, ụlọ ọrụ ahụ webatara usoro ịkụcha ihe ndị dị na Guowei na Eprel 2010. Usoro a nwere mbuli, igwe mpempe akwụkwọ, onye na-achịkwa mpempe akwụkwọ na kọmputa, yana igwe nwere ọgụgụ isi akpaka na-ebutu akwụkwọ. Na akụrụngwa ndị ọzọ. "Ọ bụghị oge mbụ anyị na Guowei rụkọrọ ọrụ. Anyị webatara Guowei ndị na-egbu akwụkwọ na mbụ. Anyị nwere afọ ojuju maka akụrụngwa ha dị elu yana ọrụ enyi na enyi. A na-akọ na usoro mgbutu nke ụlọ ọrụ ahụ zụtara Oge a bụ nke ndị Europe. Ihe karịrị 95% nke akụkụ ahụ bụ ngwaahịa ndị a na-ebubata. Usoro nchekwa na ịcha oke ziri ezi dị elu karịa nke usoro ngwaahịa ndị na-abụghị European. Maka uru nke usoro ịkụcha Guowei, "Mbelata Guowei usoro nwere ike na-akpaghị aka mezue iche iche akwụkwọ loading na ebutu, sorting, njikwa, palletizing na ndị ọzọ na ihe aga-eme nwere àgwà nke elu mmepụta arụmọrụ, obere oru ike, obere inyeaka oge, na ala mmepụta na-eri. E jiri ya tụnyere usoro ịcha nke ụdị ndị ọzọ, nke a bụ ngwaọrụ nwere mma kacha mma n'otu ọnụahịa na ọnụahịa dị ala karịa otu mma. "
N'ezie, akụrụngwa dị elu na-eweta ọ bụghị naanị obibi akwụkwọ dị elu, kamakwa ụfọdụ abaghị uru. "Ngwá ọrụ dị elu nwere uru dị elu nke akpaaka na àgwà mmepụta dị elu, nke a na-agaghị ahụ anya na-ebelata ụgwọ ọrụ na ọnụego mkpofu. Ma n'ihi ogo anyị dị elu, ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ imepụta chọrọ ogo obibi akwụkwọ dị elu ga-abịa Ebe a. ."
Omenala kwekọrọ ekwekọ iji mepụta ike dị nro siri ike
Omenala bu nkpuru obi nke oru, o di nnukwu mkpa na mmepe ya. Companylọ ọrụ ahụ kwenyere na ma onye ọrụ ọ bụla nwere mmetụta nke ịbụ onye ọrụ ya dabere na ego ụlọ ọrụ nwere ike inye ya, mana ma ọ na-enwe obi ụtọ na ọrụ yana ma ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ime ya obi ụtọ. Ya mere, na mgbakwunye na ịmepụta ụdị mbipụta dị elu, ụlọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya n'ịmepụta ikike dị nro nke ọdịbendị ụlọ ọrụ, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime nkwado siri ike iji kwalite mmepe ụlọ ọrụ. Iji
Iji wuo ikike dị nro nke ọdịbendị ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ndị ọrụ uru na-emesapụ aka n'otu aka. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ inye onye ọrụ ọ bụla ezigbo nyiwe maka mmepe ọrụ yana ohere mmụta na igosipụta onwe ya. "Anyị ga na-akpọ ndị na-ebubata ya n'ụlọ ọrụ anyị maka ọzụzụ, ma hazie ndị ọrụ ka ha sonye na ngosi. Iji mee ka ndị ọrụ nkwanye ugwu mata nke ọma na agba ma kpee ikpe nke mbụ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ga-enyekwa ndị ọkachamara ọzụzụ dị mkpa maka ndị ọhụrụ. .
Rdabere na ike nke elu-edu obibi akwụkwọ na nkwado nke a siri ike ụlọ ọrụ omenala, ụlọ ọrụ meriwo otuto si ọtụtụ ahịa kemgbe ya oruru, na iwu e idei mmiri na. Maka ọdịnihu, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụlite ụlọ ọrụ ọma n'okpuru ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ adịghị mma, isi ihe bụ ime E nwere isi abụọ, ya bụ ịdị mma na ọrụ. N'ọdịnihu, anyị ga-elekwasị anya n'ịmepụta isi ihe abụọ a. N'ịhụ ịnụ ọkụ n'obi nke ahịa obibi akwụkwọ, anyị ga-elekwasịkwa anya na mpaghara a n'ọdịnihu, na-achọghị ime ka ụlọ ọrụ buru ibu, kamakwa na-enwe olileanya imeju ndị ahịa ọ bụla.